Soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha Shiinaha Fumaric Acid Bohua
CAS Maya: 110-17-8
Magacyada Kale: Acid Fumaric
Shelf: Nolosha 2 sano
Kaydinta: Lagu kaydiyey Gaashaan ka iftiin, qalalan oo qabow
Fumaric acid, oo sidoo kale loo yaqaan fumaric acid, fumaric acid, purpuric acid ama lichenic acid, waa midab aan midab lahayn, guban kara, carboxylic acid oo ka soo jeeda butene. Fumaric acid waxay dhadhamisaa sida miro waxaana laga heli karaa Corydalis, Boletus, Lichen iyo Icelandic seaweed.
Xirxirida: 1kg/boorso, 25kgs/durbaan (Laba bac oo bac ah gudaha iyo Waraaqo-durbaan ama shuruudaha macmiilka.)
Kaydinta: Ku kaydi weelal adag, oo u adkaysi u leh iftiinka, iska ilaali soo-gaadhista qorraxda tooska ah, qoyaanka iyo kulaylka xad-dhaafka ah.
Nolosha Shelf: 24 bilood.
Waxaan sidoo kale bixin karnaa bacaha loo habeeyay sida uu rabo macaamilka
Tirada rarka: 23mts/20'FCL (sariir la'aan)
Cabbiraad: 1.22cbm/mt 28cbm/20'FCL
Waqtiga dirista: 10 ~ 20 maalmood gudahood ka dib marka la helo lacag -bixinta hore ee macaamilka iyo LC -ga asalka ahaa.
1) Fumaric acid waxaa loo adeegsan karaa sida aashitada.
2) Fumaric acid waxay leedahay shaqo bacteriostatic iyo antiseptic. 3) Fumaric acid waxaa loo adeegsan karaa sidii xakameeyaha aashitada, acidifier-ka, ka-hortagga kaamerada-ka-hortagga ka-hortagga, daweynta xawaaraha iyo xawaashka.
4) Fumaric acid waxaa loo adeegsan karaa walax acidic ah oo ah wakiil wax -soo -saar leh, waxay soo saari kartaa goobooyin dheerad ah oo heer sare ah.
5) Fumaric acid waxaa loo adeegsan karaa sidii wakiilka dawaynta ee dhexdhexaadka ah iyo dawaynta indhaha.
6) Fumaric acid ayaa sidoo kale loo adeegsadaa soosaarka cusbada polyester -ka aan la karin.
7) Warshadaha dawooyinka, waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro alexipharmic sodium dimercaptosuccinate iyo fumarate ferrous.
WAXYAABAHA QIIMEYNTA NATIIJO
MUUQAAL POWDER FINAN CAD DHAMMAAN
DHEH 99.5 --- 100.5% 99.93%
ARSENIC (As) PP1PPM <1PPM
HOGAAMIYE PP2PPM <2PPM
DEGIDA JAAHILNIMADA ≤0.05% 0.021%
BIYAHA ≤0.5% 0.19%
MIDAB (Pt-Co) ≤15# 12#
QODOBKA DHALASHADA 286 ~ 302 ° C 298 ° C
QANCIN ≤0.01% 0.005%
WAXYAABAHA INDEX NATIIJO
SHEEG ≥99.0% 99.55%
MESH MIDKA 300 MESH 100%
ARSENIC (As) PP3PPM <1PPM
BIRTA CULUS (Pb) ≤10PPM <5PPM
DEGIDA JAAHILNIMADA ≤0.1% 0.027%
BIYAHA ≤0.3% 0.19%
MIDAB (Pt-Co) ≤15 Hazen 12 Hazen
QODOBKA DHALASHADA 286 ~ 289 ° C 289 ° C
KAALINTA (25 ° C) ≥1.00g/100ml biyo 1.03g/100ml biyo
Hore: DL-Malic Acid
Xiga: Xakamaynta Aashitada BP98 Fasalka Crystalline Powder 99%min Sodium Citrate
Fasalka Cuntada Acid Fumaric
Warshad Acid Fumaric
Qiimaha Acid Fumaric
Bixiyaha Acid Fumaric